Shiinaha Customized qalabka caafimaadka kululeeyaha tuubooyin-saareyaasha, Warshad - Dongguan Guancheng qirayso Hardware Co., Ltd.
Hoyga > Kuleylka kuleylka > Module hiitarka kuleylka > Qalabka caafimaadka qalabka hiitarka
Qalabka caafimaadka qalabka hiitarka
Astaamaha moduleka hiitarka kuleylka wuxuu u qaybsan yahay salka iyo module hiitarka kuleylka kuleylka riveting kuleylka laba qaybood, salka u ah aluminiumka kuleylka kuleylka ama saxanka kuleylka naxaasta ah, qaybaha adag ee dabaqa leh tuubada kuleylka iyo kuleylka isku mar, samee kuleylka kuleylka si dhakhso leh, dusha ilkaha dushiisa leh tuubada kuleylka ee la dhigo tirada godka tuubada ayaa la qoday ama godka tuubada
1. Astaamaha moduleka hiitarka kuleylka wuxuu u qaybsan yahay salka iyo module hiitarka kuleylka kuleylka riveting kuleylka kuleylka laba qaybood, salka aluminiumka kuleylka kuleylka ama saxanka kuleylka naxaasta ah, qaybaha adag ee dabaqa leh tuubada kuleylka iyo kuleylka isku mar, samee kuleylka kuleylka si dhakhso leh, dusha ilkaha dusha sare leh tuubada kuleylka ee lagu dhejiyay tirada godka tuubada ayaa la qoday ama tuubada tuubada, qaybta labaad ee qadarka loo baahan yahay ee tuubada kuleylka leh caleemaha ilkaha caleen ka dib markii ay soo baxday sida qayb ka mid ah moduleka leh tuubada kuleylka soosaarida qalabka hiitarka, oo ay weheliso jirka weyn ee hiitarka, gelinta ama tuubada kuleylka gudaha tubada godka godka jeexjeexa, buuxi dhalada alxanka, ka dibna ku dar heerkulka sare waxay ka dhigi kartaa tuhunkeeda guud ahaan.
2. Ku-xirnaanta kuleylka wanaagsan iyo saameynta ku-dhalashada kuleylka ee hiitarka kuleylka kuleylka ee qaybta sare. Tani waa habka ugu wanaagsan ee hiitarka kuleylka kuleylka ku shaqeeya. Badanaa waxaa loo isticmaalaa qalabka warshadaha, mashiinada caafimaadka, qalabka duulista iyo meelaha kale!
3. Faa'iido darrooyinka qalabka shucaaca moduleku leeyahay waxay leeyihiin kharash waxsoosaar oo sarreeya, tiro badan oo dhuumaha naxaasta ah iyo dhuumaha kuleylka, qaddar cilladaysan, waqti shaqo dheer, baahida loo qabo in la furo kharashaadka dhimashada, qiimaha sare, oo aan ku habboonayn dufcad yar wax soo saar.
Calaamadaha kulul: Qalabka caafimaadka radiator biibiile kuleylka, Shiinaha, kartoo, saarayaasha, Warshad
Aaladda sare hiitarka kuleylka